गर्मीमा यी खानेकुरा खाएर छाला स्वस्थ राख्न सकिन्छ!! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्मीमा यी खानेकुरा खाएर छाला स्वस्थ राख्न सकिन्छ!!
अन्डाःहामी सबैलाई जानकारी नै छ, अण्डामा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। अण्डाको सेतो भागमा प्रोटिन तथा एल्ब्युमिन पाइन्छ। त्यसकारण अण्डा सेवन गरे छालामा दाग तथा धब्बा आउन दिँदैन। अण्डाको सेतो भागमा पाइने भिटामिन र मिनरलले छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत पु–याउँछ।
गाँजरःगाँजर सेवनबाट पेटको समस्या हटाउँछ। यसका साथै रगतको सफाइ पनि गर्छ। गाँजरमा भरपूर मात्रामा भिटामिन ए पाइन्छ।
बदामःबदाममा प्रोटिन, भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ। यसको नियमित सेवनले छाला स्वस्थ राख्न मद्दत पु–याउँछ। यस्तै, स्मरण शक्ति राम्रो बनाउन पनि यो रामवाण नै मानिन्छ। चिसो मौसममा बदाम खाने सल्लाह दिने गरिएको पाइन्छ। बदामको दूध स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। यसको दूधले शरीरमा सुगर लेबललाई कन्ट्रोल राख्छ।फर्सीको बिजःफर्सीको बिजमा भिटामिन ए, भिटामिन सी र जिंक पाइन्छ। यसले छाला स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। (gnewsnepal बाट सभार)
चुनाबी सरकार गठन गर्ने परिस्थिति आए काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्छ : काँग्रेस नेता एनपी साउँद
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए एमाले संसदीय दलको बैठक !!